Fanendahana sy fifohana rongony Mpianatra tsy ampy taona ny roa tamin'ireo jiolahy
ITAOSY Tratra ilay tovovavy mpanendaka olona marefo
Ela ny nitoratorahana ilay tovovavy iray mpanendaka sy mpisoloky eny amin’iny faritra Itaosy Atsimondrano iny omaly Alatsinainy. Raha araka ny loharanom-baovao mantsy dia hataon’izy io mahita faisana mihitsy ireo ankizy madinika sy olon-dehibe hitany fa marefo.
Soavadia - Toliara Sinoa voatafika, lasa ny volabe
Teratany Sinoa iray monina ao Toliara no nisy nanafika tao an-tranony miditra ao an-dakoron’ny lisea Laurent Botokeky ao amin’ny fokontanin’i Soavadia Toliara ny harivarivan’ny alatsinainy 22 jona 2020 mbola andro mazava tokony ho tamin’ny 5 ora hariva tany ho any.
Fanafihana grossiste sy cash point Olona 5 no efa voasambotra
Lehilahy miisa 03 no voasambotry ny Polisy miasa ao amin’ny BC4 Anosy ny 13 jona lasa teo teny 67 ha sy Ambatobe noho ny resaka fanafihana mitam-piadiana.
Ambohimirary Vehivavy iray hita faty efa tsy nisy taova intsony
Nampalahelo ny zava-nitranga teny Ambohimirary ny alatsinainy teo. Ramatoa iray manodidina ny 44 taona no hita faty teny an-toerana izay efa tsy nisy taova intsony.
Ifotaka – Amboasary atsimo Manjaka ny dahalo, miantso vonjy ny mponina
Mitaraina mafy sy miantso vonjy ireo mponina any Ifotaka ao anatin’ny Distrikan’Ámboasary atsimo fa tena manjaka ny dahalo .Halatr’ómby, Fanafihana mitam-piadiana ,
Ady amin`ny dahalo ambony latabatra “Rehefa miova ny toe-tsaina, mihena ny kolikoly”
Nisy ny fanambarana niombonana nataon` ireo Minisitra misahana ny fandriam-pahalemana sy ny fitsarana nanambara tamin'ireo Solombavam-bahoaka, ny herinandro lasa teo,
Ambatomanga Morarano Chrome Renim-pianakaviana iray nalain’ny dahalo an-keriny
Fanafihan-jiolahy mirongo fitaovam-piadiana mahery vaika no nitranga afaka omaly alatsinainy 25 mey tokony ho tamin’ny 10 ora alina tany.
Olona miisa 08 no voasambotry ny polisim-pirenena avy ao amin’ny CSP1 Analakely nandritra ny hetsika manokana natao hiadiana amin’ny tsy fandriam-pahalemana eny amin’ny faritra Analakely sy ny manodidina iny ny fiandohan’ny volana mey teo.
Fanendahana sy fividianana entana halatra ary fivarotana rongony no antony nisamborana azy ireo izay misy vehivavy. Manoloana ny fitarainana mifanesy azo avy amin’ireo olona mandeha maraina sy ireo mponina eny amin’ny faritra Antaninarenina sy ny manodidina izay voaendaka sy tratry ny sinto-mahery ataona andian’olona dia nanao ny fanadihadiana manokana ny polisy. Nahitam-bokany izany ny sabotsy faha 09 may teo. Tokony ho tamin’ny 05 ora maraina mantsy no nifanehatra tamin’ny polisy ireo olon-dratsy raha mbola teo am-panendahana olona mpihazakazaka vao maraina ireo tsy mataho-tody. Nosamborina avy hatrany izy ireo ka ny 01 no tratra raha tafaporitsaka kosa ny 02 hafa. Nandritra ny fisavàna azy ireo dia nahitana zava-maranitra tany aminy. Niaiky ity voasambotra ity fa ireo mpanao fanatanjahantena vao maraina no tena hendahiny sy ambanany amin’ny basy na antsy rehefa manendaka izy ireo. Izy ihany koa no nanondro ny toerana misy ny namany iray teo Ambodirano Ampefiloha. Voasambotra ihany koa ity farany ny alatsinainy 11 mey teo. Nandritra ny fanadihadiana azy dia nanondro ny mpividy ny entana halatra ihany koa ity lehilahy ity ka dia olona iray no voasambotra teo « La reunion kely ». Niaiky ihany koa ireo voasambotra ireo fa mifoka rongony izy ireo alohan’ny hanaovany ny asa ratsiny ka eny Anosibe no mpamatsy azy ireo. Nidina tao amin’ilay toerana avy hatrany ny polisy ka olona 5 no voasambotra tao niaraka tamina rongony tamina fonosana maromaro. Ny 2 tamin’ireo voasambotra dia mpianatra mbola tsy ampy taona tonga hividy rongony. Mbola karohina kosa ilay mpanendaka mitondra basy.